#Izitudiyo zoYilo zeAthena zanamhlanje - I-Airbnb
#Izitudiyo zoYilo zeAthena zanamhlanje
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uKostas iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Wamkelekile eAthena! Sisitudiyo esiyilwe ngobuchwephesha esibekwe kwindawo yemveli, kwesinye sezona zitrato zisembindini, kodwa ezolileyo zaseMytilene. Kutheni le nto isindululo sethu sibeka phakathi kweenketho zokuqala kuyo yonke iNorthern Aegean? Ngokuqinisekileyo akunjalo ngamabona-ndenzile!
-Isitudiyo seflethi esleek yanamhlanje
-Iglasi ezimbini ezibonisa isandi iifestile kunye neemfama ezimnyama zegumbi
-Inverter A / C Unit nokuba ukupholisa okanye ukufudumeza
-Iyunithi yesifudumezi samanzi ashushu kwangoko
-Amanzi naMandla azimele
-Ikhitshi ixhotyiswe ngomatshini wekofu we-Nesspresso, i-oveni, isipheki sokubilisa, itoaster
-Iisokethi zombane ezikwizixhobo ezifanelekileyo
-Indawo eninzi yempahla
- Isomisi enwele, ii-hangers, i-ayina kunye nebhodi yoku-ayina
-Icocwe ngokobuchule kanye phambi kokufika
-Ilinen entsha kunye neetawuli
Wamkelekile eTirtayo! Sisitudiyo esiyilwe ngobuchwephesha esibekwe kwindawo yemveli, kwesinye sezona zitrato zisembindini, kodwa ezolileyo zaseMytilene. Kutheni isindululo sethu sibeka phakathi kweenketho zokuqala kuyo yonke iNorthern Aegean? Ngokuqinisekileyo akunjalo ngamabona-ndenzile!
Uyilo olugqwesileyo lwangaphakathi
Isitudiyo sisandula ukulungiswa ngumhombisi oyingcali ukuya kutsho kwiinkcukacha zokugqibela. Sijonge ukwenza okona kulungileyo ngokusebenza kunye nokukhululeka, ukuze sikubonelele ngeyona ndawo imnandi yokuhlala, nokuba kuhambo lwakho lweshishini okanye impelaveki yakho yothando kwisixeko sethu esihle.
Indawo entle kakhulu
Isitudiyo sethu sikwindledlana yendlela yeSitalato i-Ermou, indawo yentengiso yesixeko, imiz nje emi-2 ukusuka kwisikwere esisembindini. Kukho uluhlu lwezinto ezinomtsalane kwindawo ekufutshane kakhulu, njengenqaba yaseMytilene, imyuziyam yezakudala kunye neendawo zokutyela ezipholileyo zesixeko. Iiteksi kunye neebhasi nazo ziyafumaneka ngaphakathi 2 min ukuhamba.
Yiba namava okuhlala kwikota eqhelekileyo yaseMytilene enezindlu ezintle ezindala ezibonisa imbali kunye nazo zonke iimpembelelo zesixeko, uhlala ubheka kwindawo ethile. Hamba uye enkundleni yamandulo, i-Turkish mnths okanye yecawa kwaye xa uziva ngathi ukuba okulingene imini, kuya kusoloko kubakho ekhefi okanye ukoma ekufutshane, apho ungakwazi ukunandipha elithile lendawo yekofu okanye ouzo yakho, elwe kule idolophu!
Ndihlala ndijonge phambili ekubambeni abantu abakhulu, ke ndiza kulinda umbuzo ovela kuwe kwaye sinokuqala ukuxoxa ngezinye iinkcukacha ukusuka apho.
Eyona nto iphambili yam kukuphendula ngoko nangoko kuyo yonke imibuzo yeendwendwe zam. Ndiyafumaneka nanini na. Nceda usebenzise le ndlela yonxibelelwano yakwa-Airbnb njengoko ndifumana ngoko nangoko yonke imiyalezo. Iselfowuni yam isenokungabi naluphawu kwaye andizukwazi ukujongana kwangoko nayo nayiphi na inkxalabo okanye imibuzo onokuba unayo. Okona kubaluleke kakhulu, sishiya undwendwe lwethu lodwa ukuba luphumle kwaye lonwabe!
Eyona nto iphambili yam kukuphendula ngoko nangoko kuyo yonke imibuzo yeendwendwe zam. Ndiyafumaneka nanini na. Nceda usebenzise le ndlela yonxibelelwano yakwa-Airbnb njengoko ndif…
Inombolo yomthetho: 00000202696
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mitilini